igolide crucible - XTL
Usendaweni efanele ye- igolide crucible.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
Inikeza ukunethezeka okuhle kokushisa. Isiza izinga lokushisa lomzimba lehle ngamadigri amaningana ngokukhipha inani lokushisa elikhiqizwa umzimba, ngaleyo ndlela kusize ukulala kwekhwalithi..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu igolide crucible.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
I-ceramic crucible ehamba phambili ene-spout Company - XTL
i-ceramic crucible ene-spout uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa mayelana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.I-XTL ifingqa ukukhubazeka kwemikhiqizo edlule, futhi iqhubeka ithuthukisa . Imininingwane ye-ceramic crucible ene-spout ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.